Indlu Esemaphandleni Esemaphandleni eWunstead Valley - I-Airbnb
Indlu Esemaphandleni Esemaphandleni eWunstead Valley
Indlu esemaphandleni entle enomthi omde onendlela yokungena imoto, nekude kwindlela ephambili. Singakwicala leHotele endala yaseWunstead kunye necawa, yi-18kms kuphela ukuya eWaipukurau. Le ndlu isemaphandleni yinxalenye yefama esebenzayo, nenendawo enembali epholileyo. Indawo enkulu ikufutshane, kodwa indawo yokuhlala ikude kakhulu nendlu esemaphandleni, ngoko isabonwa ngumntu wonke. Ithe nca phakathi kwemithi, kunye nezihlahla zemveli kunye nezilwanyana zasefama kwiindawo zokubambelela ezijikelezileyo, le yindawo ekhethekileyo kakhulu!
Izinto zebhedi / iitawuli ziyafumaneka. Le ndlu isemaphandleni ikwindawo efanayo nenye indawo yokuhlala - ukuba unosapho/abahlobo abangakumbi abafuna ukuhlala kule ndawo. Khangela iMotuotaraia Homeestead - Umbuki zindwendwe nguMargaret phantsi kwendawo yePorangahau.
Izazisi ziyakuthanda ukuqinisekisa ukuba uthe zava kule ndlu isemaphandleni, kodwa ngaphandle kwethemba lokuba uza konwabela ukuzola kwelizwe. Ndazise ukuba unomdla wokuva ngefama, imbali yefama. Ifama yifama esebenzayo, ngoko izithuthuthu ziyasetyenziswa, kunye nomatrasi, nto leyo eyenza ingxolo!
Izazisi ziyakuthanda ukuqinisekisa ukuba uthe zava kule ndlu isemaphandleni, kodwa ngaphandle kwethemba lokuba uza konwabela ukuzola kwelizwe. Ndazise ukuba unomdla wokuva ngefama…